myonayla2014 Junior Member
07-22-2016, 11:25 PM ဒုတ် အူး ဟူး ဟူး အားး
ကောင်မ နင့်စောက်ပတ်ကို ကားထားစမ်း
အ အမယ်လေး နာလို.ပါ တော်ပါတော့
နင့်လိုကောင်မမျိုးက ဒီလို ဆော်ပေးမှရမှာ ကောင်မကားထား
ဒုတ် အားလားလား ဒု အူး ဒုတ် အား ဒုတ် ဒုတ် အားလလ ကောင်မ စောက်ပတ်က စေးနေတာပဲ ဆောင့်ထည့် နာနာဆောင့်ထည့်
ခင်မမက သင်ဇာ၏ ပေါင်၂ဘက်ကို ဖြဲကားကာ အ၀င်အထွက်ကို ထိမိစေရန် ထိန်းထားပေးလိုက်သည်
အမှန်တော့ သင်ဇာ၏စောက်ပတ်ဖြင့် မညှာမတာဆောင့်ချပေးနေရသည်မှာ သစ်ငုတ်ကြီးသာ ဖြစ်သည် ဒေါ်ခင်မမကို အယုံသွင်းပြီး လုပ်ကြံရန် ကြံစည်ထားသော သင်ဇာမှာ
ယခုတော့ ကိုယ်တုံးလုံးဖြင့် ဆောင့်ဆောင့်ထိုင် ပေါင်ကားထားသည့်ပုံစံဖြင့် အင်အားကြီးမားလွန်းသော လူသန်ကြီး၂ယောက် တဘက်တချက်စီမှ ချုပ်ထားပြီး
သစ်ငုတ်ကို သင်ဇာ၏စောက်ပတ်ဖြင့် ဆောင့်ချခံနေရခြင်းဖြစ်သည် သင်ဇာအတွက် ကံကောင်းသည်က သစ်ငုတ်သည် အလွန်ချွန်ထက်မနေခြင်းကြောင့် စောက်ပတ်ကွဲမထွက်ခြင်းပင်
သို.သော် ဒီပုံစံအတိုင်းသာ ဆက်ဆောင့်ပစ်ကြမည်ဆိုပါက သစ်ငုတ်သည်လီးချောင်းကြီး မဟုတ်သဖြင့် စောက်ပတ်စုတ်ပြတ်သွားမည်မှာ သေချာနေသောကြောင့် သင်ဇာမှာ
ရှင် ဒီလောက်ပဲ လုပ်တတ်တာလား လူယုတ်မာမကြီးရဲ.
ဘယ်ကမလဲ နင့်လိုကောင်မမျိုးအတွက် အများကြီး ရှိသေးတာပေါ့ နင်ဘာတွေလောနေတာလဲ ကဲပါ နင်လောနေတော့လည်း ငါပြောင်းပေးရတာပေါ့လေ
ဟဲ့ ဒီသစ်ငုတ်ကို ဓားနဲ.မွှပလိုက်ကြစမ်း
သစ်ငုတ်ကို ဓားဖြင့် အနည်းငယ်အရာပေးခုတ်ထစ်လိုက်ရာ နဂိုသစ်ငုတ်ထက် ပိုမိုကြမ်းရှပြီးချွန်ထက်လှသောပုံစံကြောင့် သင်ဇာမှာ ရုတ်တရက်ဘာပြောရမှန်းမသိဖြစ်နေစဉ်
လူသန်ကြီး၂ယောက်မှာ သင်ဇာစောက်ပတ်ကို သစ်ငုတ်ထိပ်တွင် တည်ပေးလိုက်တော့သည်
ဒါ ဘာ ဘာလုပ်တာလဲ မလုပ်နဲ. အား မလုပ်နဲ.
ဒေါ်ခင်မမမှာ သင်ဇာ၏ သေးသွယ်သောခါးကို ကိုင်ကာ ချွန်ကော့နေသော သစ်ငုတ်ကို သင်ဇာစောက်ပတ်ထဲသွင်းလေတော့သည်
အား အမလေး အ အ နာ နာ အား မလုပ်ပါနဲ. ကျွန်မဟာ ကွဲသွားမယ် မထည့်ပါနဲ.
ငြိမ်ငြိမ်နေနော်ကောင်မ နင်လှုပ်တာနဲ. နင့်စောက်ပတ်ပြဲသွားမယ်
အဟင့် အဟင့် မလုပ်ပါနဲ.တော့ အား ပြဲကုန်လိမ့်မယ် တော်ပါတော့ ထပ်မထည့်နဲ.တော့ တော်တော့
ဒေါ်ခင်မမမှာ လက်မြန်ခြေမြန်ရှိသူပီပီ သင်ဇာ၏ စောက်ပတ်ကို ငုတ်မရှစေရန် အမြန်ဖိချပေးလိုက်ရာ သင်ဇာ၏စောက်ပတ်ထဲတွင် ချွန်ကော့နေသော ငုတ်ကြီးအဆုံးထိဝင်နေလေသည်
လူသန်ကြီး၂ယောက်မှာ သင်ဇာကို တဘက်စီချုပ်ထားလိုက်ရာ
ရှင် ရှင်တို.ဘာလုပ်မလို.လဲ ထုတ်ပေး ခုထုတ်ပေး အား
ဒေါ်ခင်မမမှာ သင်ဇာရှေ.တွင် ပလာယာကြီးအားပြသပြီး နင့် နို.သီးခေါင်းနဲ. စောက်စေ့ကို ငါဆွဲလိမ်မယ် နင်ရုန်းရင်တော့ နင့်စောက်ပတ်စုတ်ပြတ်မှာပဲ ဟင်းဟင်း
ရှင် မလုပ် မလုပ်ပါနဲ. ဟင့်အင်း ဟင့်အင်း
ပြောပြောဆိုဆိုနှင့် ဒေါ်ခင်မမမှာ ပလာယာဖြင့် သင်ဇာ၏ နို.သီးခေါင်းကို မညှာမတာဆွဲလိမ်လေတော့ရာ
အား အားလ အားး
အားလ အားလ အအ
နင်ခံနိုင်ပါ့မလား ဟားဟား ဒီမှာလာဦးမှာ
အားလား အအ အားလား
သင်ဇာမှာ နို.သီးခေါင်းပြတ်ထွက်လုမတတ် လိမ်ဆွဲနေသော ဒေါ်ခင်မမ၏ လက်စွမ်းကြောင့် ရုန်းမိလေတော့ရာ
အားလ ဗြိ အလ ဗြိ ဗြဲ အားဟ သေ အားလား ဗြိ အမယ် ဗြိဗြဲ အလ ပြဲကုန်ပြီ အားးး
ဟားဟား စောက်ပတ်က ခုမှထိတာ ကဲဒီထက်ကြမ်းတာလေးလာပြီ
ပိုကြမ်းတမ်းသော ပလာယာလိမ်ချက်ကြောင့် သင်ဇာမှာ အပေါ်သို.ကော့တက်လာလေတော့သည် ထို.နောက် ဒေါ်ခင်မမမှ ပလာယာညှပ်ထားသော နို.သီးခေါင်းကို လွှတ်ပေးလိုက်ရာ
သင်ဇာမှာ ချွန်ကော့နေသောငုတ်ကြီးကို သူမ၏စောက်ပတ်ဖြင့် အညှာအတာကင်းမဲ့စွာ ဆောင့်ချမိလေတော့သည်
ဒုတ် ဗြဲဗြိဗြိဗြိ အား
ထိုအတိုင်း ဒေါ်မမမှာ ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ပေးနေရာ သင်ဇာမှာ သူမ၏စောက်ပတ်ဖြင့် ချွန်ကော့နေသော သစ်ငုတ်ကြီးကို ထပ်ခါတလဲလဲဆောင့်လိုးပေးနေရသဖြင့် စောက်ပတ်မှသွေးများ
ယိုကျလာကာ အာဟ အ ဇုတ် အင့်အလလ
ဇုတ် အီးယား အား သေပါပြီ
ဇုတ် ဇုတ် အမေ့ အား
စုတ်ပြတ်ထွက်သည်အထိ ခံစားရပြီး သင်ဇာမှာ မေ့မျောသွားလေသည်။ သို.သော် ဒေါ်မမမှာ ထို.ထက်ပိုထိစေရန် မေ့မျောနေသော သင်ဇာ၏် ဖူးယောက်ကိုင်းနေသော နို.သီးခေါင်းမှ ပလာယာဖြင့်ညှပ်ကာဆွဲတင်ထားပြီး သင်ဇာ၏စောက်ပတ်ကြီးမှာ တော်တော်လေးအမြင့်ရောက်မှ လွှတ်ချပေးလိုက်ရာ မေ့မျောနေသော သင်ဇာမှာ သူမ၏ စောက်ပတ်ကို သစ်ငုတ်ကြီးဖြင့် အရှိန်ပြင်းထန်စွာဆောင့်ချမိလေရာ
ဇုတ် ဗြိဗြိဗြိဗြိ ဗြဲဗြဲဗဲ
ဆိုသည့် စောက်ပတ်ကွဲထွက်သွားသော အသံကို ဒေါ်မမတို.တသိုက် ကျယ်လောင်စွာကြားကြသလို ပန်းထွက်သွားသော သင်ဇာ၏စောက်ပတ်ထဲမှသွေးများ သင်ဇာ၏ မပစ္စည်းထဲမှ
ယိုစီးကျလာသော မသုတ်ရည်တန်းကြီးများတို.ကလည်း သင်ဇာ၏ စောက်ပတ်မှာ စုတ်ပြတ်ထွက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း သင်ဇာမှာ
ချွန်ကော့နေသောသစ်ငုတ်ကြီးကို ပြန်လည်ချောမွေ.သွားအောင် သူမ၏စောက်ပတ်စုတ်ပြတ်ပျက်စီးခံကာ လုပ်ပေးခဲ့ကြောင်း သစ်ငုတ်စများစူးစိုက်ကာ
ကွဲထွက်နေသော သူမ၏စောက်ပတ်ကိုကားကာ သက်သေခံနေပြီ ဖြစ်ပါတေ့ာသတည်း။
ကောင်မတော့ အဖုတ်ကွဲသွားပြီ ကဲဒီကောင်မကို မထားစမ်း ငါ့ဆီကို မီးချောင်း၂ချောင်းယူလာခဲ့ ဒီကောင်မကိုစစ်ရမယ် သူ.ဆီမှာ ပေါင်းကြံတဲ့သူရှိရမယ်
ထို.နောက် ဒေါ်မမမှာ စောက်ပတ်စုတ်ပြတ်ကာ မေ့မျောနေသောသင်ဇာ၏ စောက်ပတ်နှင့် စအိုဝထဲသို. မီးချောင်း၁ချောင်းဆီကို ဖြေးညှင်းစွာထိုးသွင်းထားလိုက်သည်
မီးချောင်းမှာ မရှည်သော အလတ်စားဖြစ်သော်လည်း တုတ်ခိုင်သောအမျိုးအစားဖြစ်သဖြင့် သင်ဇာ၏ကွဲပြဲနေသောစောက်ပတ်နှင့်ပင် မဆန်.မပြဲဖြစ်ကာ ၀င်နေသော်လည်း
တခါမှ ဖင်အချမခံရဘူးသော သင်ဇာ၏စအိုထဲမှ မီးချောင်းမှာမူ အလွန်တင်းကျပ်သောဒဏ်ကြောင့် မီးချောင်းထဲမှ ဓာတ်ငွေ.များမှာ တချက်တချက်လင်းလင်းသွားသည်အထိ သင်ဇာ၏စအိုက
ထို.နောက် ဒေါ်မမက ဟဲ့ငါ့ကို ရေတပုံးသယ်လာပေးစမ်း ထိုရေပုံးမှရေဖြင့် သင်ဇာအား ပက်ထည့်လိုက်ရာ
ဗွမ်း အူး အူး အား
သင်ဇာမှာ ပြန်သတိရလာလေသည် ထို.နောက် ဒေါ်မမက သင်ဇာ၏ ဆံပင်ကိုဆွဲကာ
ဗြန်း အ ဗြန်း အား ဗြန်း အား
ဒေါ်မမမှာ သင်ဇာ၏ပါးကို လိမ့်ရိုက်နေတော့သဖြင့် သင်ဇာမှာသတိပြန်ရလာပြန်လေသည်
ကဲကောင်မ နင့်အပြင် ဘယ်သူရှိသေးလဲ ငါ့ကိုပြောစမ်း နင်မပြောရင် နင့်ကိုငါ တစစီဆွဲဖြဲပစ်မယ်နော်
ဟဲ့ကောင်မ နင့်စောက်ပတ်နဲ.ဖင်ကို ကြည့်စမ်း
ရှင် ရှင် ဘာလုပ်တာလဲ ပြန်ထုတ် ကွဲကုန်လိမ့်မယ် အား အား
ပြန်ထုတ်ဖို.က နင့်ပေါ်မှာပဲ မူတည်တာ ဟားဟား
မပြောဘူး မသိဘူး ကျွန်မတယောက်တည်းလုပ်တာ ဘယ်သူမှမပါဘူး
နင် ဒီလိုပြောမယ်မှန်း ငါသိတယ် ဒေါ်မမတဲ့ နင့်လောက်တော့အပျော့ပေါ့အေ နင့် နို. စောက်ပတ် ဖင် တခုစီဖြစ်တော့မှာ ဟားဟား
ရှင် ဘာယုတ်မာဦးမလို.လဲ တော်တော့နော် ရှင်တော်တော့နော် ခုလွှတ်ပေးတော့
ဟား ဟား ငါ့ကို ခုနက မီးဖိုထဲက သံချောင်းယူခဲ့စမ်း ပူပစေနော် ဒါမှဒီကောင်မကကြိုက်မှာ
ဒေါ်မမမှာ နီရဲနေသော သံချောင်းအားယူကာ သင်ဇာ၏ ပလာယာစာမိထားသောကြောင့် ဖူးယောင်နေသော နို.သီးခေါင်းအား တေ့ပေးလိုက်ရာ
အား အား ရှဲ ရှဲ အားလား အား ပူ အား အား သေပါပြီ အား ပူတယ်
အားအား အလ အား ပူ အား
နင်ကြည့်ရုန်းနော် နင့် စောက်ပတ်နဲ.ဖင်ထဲက မီးချောင်းတွေက ကွဲထွက်သွားရင် ဟင်းဟင်း
ထို.သို. ဒေါ်မမပြောမှ သင်ဇာမှာ သူမ၏ စောက်ပတ်နှင့် စအိုထဲမှ မီးချောင်းကို သတိရသွားသည် မီးချောင်းကြီးများအထဲမှာကွဲထွက်သွားလျှင် မီးချောင်းစများမှာ
သင်ဇာ၏ စောက်ပတ်ကို စိုက်ဝင်ကုန်မယ်ဖြစ်သလို ပူလောင်သော ဓာတ်ငွေ.များမှာ စောက်ပတ်နှင့်စအိုထဲသို. ဆောင့်ဝင်ကုန်မည် တဖန်သားအိမ်နှင့် စအိုထဲမှ
ပြန်ကန်ထွက်လာသော ဓာတ်ငွေ.များမှာ ထွက်စရာမရှိသဖြင့် လာရာလမ်းအတိုင်းပြန်ထွက်လာဦးမည် ထိုအခါ နောက်ကထပ်မံဝင်ဆောင့်လာမည်.အငွေ.များက
ခံနေမည်ဖြစ်သဖြင့် ဆင့်ကာဆင့်ကာ ဆောင့်ခံသလိုဖြစ်နေတော့မည်ဖြစ်ရာ သင်ဇာမှာ ခင်မမ၏ သံချောင်းပူကို ကြိတ်ခံနေရတော့သည်။
ခင်မမမှာ သံပူချောင်းကို သင်ဇာ၏ နို.သီးခေါင်းများကို နီရဲသည်အထိ ကပ်ပေးနေသောကြောင့်
အားအားလား ရှဲရှဲ အုအူး ရှဲ အီးယား
ထိုစဉ် ခင်မမမှာ သံပူချောင်းကို သင်ဇာ၏ စောက်စေ့ကိုပြောင်းကပ်ပေးလိုက်ရာ
ရှဲ အအလအ အားးးး လားးးလားးးး အားးးးးး အီးယားအားးးးးး
သင်ဇာမှာ စောက်ပတ်ထဲမှ ထိုးထည့်ခံထားရသောမီးချောင်းကို သတိမရတော့ပဲကော့တက်လာလေတော့သည် စောက်ပတ်ထဲမှမီးချောင်းမှာ သင်ဇာ၏စောက်ပတ်ညှစ်အားကြောင့် တဗြစ်ဗြစ်မြည်လာကာ ကွဲထွက်သွားလေတော့သည်
ဗြစ်ဗြစ်ဗြစ် ဖုန်း ချလွန်း အုန်း ဗြန်း
အားလ ပြဲ အလလ အစ်အစ်
သင်ဇာ၏ စောက်ပတ်မှာ မီးချောင်းကွဲစများ ဖွေးနေအောင်စိုက်နေကာ စောက်စေ့ပြတ်လှနီးပါးတွဲလောင်းကျနေသလို
စောက်ပတ်သားများမှာ ပြတ်ထွက်သွားလေတော့သည် ခင်မမှာ သင်ဇာ၏ စောက်စေ့ကို အညှာအတာကင်းစွာ
ကောင်မနို. ၂လုံးကိုဖြတ်ပြီးတော့ ခွေးစာကျွေးလိုက် ပြီးတော့
့ဒီကောင်မကို ကြိုးတုပ်ပေါင်ကားပြီး အမှိုက်တွင်းထဲထည့်ထား
၃ရက်လောက်တော့ ကောင်မကို ယင်စိမ်းကောင်နဲ.မျှော့စာလုပ်လို.ရတယ်
Thanks given by: ဒေါ်က်တာမလေး , mgwahh , ပန်းဆည်းဆာ , tunko , B B , MOEGYI , wavecafe , thecaveman , 69lay